Mogadishu Journal » Mareykanka oo ka hadlay duqeymihii ugu dambeeyay
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo saartay duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in duqeymahaasi lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyntii ugu horeysay ka fulisay gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana ay ku dishay 6 xubnood oo Shabaab ka mid ah sidoo kalena ay ku burburisay gawaari dagaal.
Duqeynta Labaad ayaa ka dhacday degaanka Baqdaad, waxaana halkaasi lagu dilay 4 xubnood oo Shabaab ka tirsan sidda ay sheegtay dowladda Mareykanka.
Warka ayaa lagu sheegay in dhammaan howlgalladaasi ay ka qeyb qaateen Ciidanka sidda gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya.
Ma jirto Cid Shacab ah oo ay waxyeelo soo gaartay sidda lagu sheegay warka.